UKhuzani ufuna uNgizwe esitikini ngolwezindondo
UGONYULUKA konke umculi kamaskandi ngowayengumsakazi woKhozi FM okuthiwa balanyulwe sebebambana ngezihluthu emcimbini ngempelasonto.
UKhuzani Mpungose okuvele ukuthi unqandwe imeya yaseNkandla esho ukugadla kuNgizwe Mchunu obephethe uhlelo emcimbini nokusolwa ukuthi ubize iGcokama Elisha esikhundleni sakhe. Kuthiwa imeya yaseNkandla uThami Ntuli uyena olamulile kulo mcimbi weMayoral Cup.
UKhuzani uthi usekhathele ukuhlukunyezwa uNgizwe, ubona kufanele abize ngisho isithangami nabezindaba esizoveza konke okubalwa nezindondo athi wamupha zona.
“Ngizwe uyongihlukumeza kuze kube nini, cala lini engalenza kuwe elenza ungiphilise kanje? Ngazalwa nami nginomndeni nekhaya. Le nto oyenzayo angiyithandi", kusho uKhuzani.
Eqhuba uKhuzani uthe sekuyisikhathi samaqiniso futhi uzimisele ngokugeqa amagula. "Kuzongiphoqa ukuthi ngibize abezindaba abekhona uTshatha noMlamuli Nxele nababeqinisekisa imiphumela (Auditors) yama SMS kuMantshontsho kuzophuma iqiniso. Lezi zindondo othi wangipha zona ngifuna usho phambi kwezintatheli, kukhishwe nobufakazi bama SMS. Uma bungaphumi ubufakazi ngizozisa kini eMabhuqwini zontathu lezi zindondo," kusho uKhuzani.
Uphinde wakuveza ukuthi uyozinikeza unina kaNgizwe qobo ukuze ezohlukana naye.
UKhuzani uthe uxakwa ukuthi aMantshontsho aqala ngo-2012 waqokwa kwaze kwaba kathathu ngo-2013, 2015 nango-2016 engahlabani ngalutho kwaze kwalunga ngo-2017. Uqhakambisa ukuthi wasizwa abantu ebabemvotela. Uphethe ngokuthi maduze uzokhipha usuku okumele kuhlanzwe ngalo amaqiniso.